‘सीमा त मात्रिका र वीपीले बेचेर खाए, अब पर्खाल लगाउनुपर्छ’ – Makalukhabar.com
‘सीमा त मात्रिका र वीपीले बेचेर खाए, अब पर्खाल लगाउनुपर्छ’
मकालु खबर	 २०७६ कार्तिक २३ १२:२२ मा प्रकाशित 87 0
कार्तिक २३, काठमाडौं । नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद फेरि बल्झिएको छ । भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो सीमाभित्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाली जनताको रगत एकपटक पुनः भारतका विरुद्ध उम्लिएको छ ।
तीन वर्ष अघिको अघोषित भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्धमा सडकमा उभिएका नागरिक अहिले स्वतस्फुर्त सडकमा ‘गो ब्याक इण्डिया’ को नारा लगाउँदैछन् ।
देशका विभिन्न भागमा दिनहुँ जस्तो प्रदर्शन भइरहेका छन् । ‘कालापानी, लिपुलेक नेपालको हो, गो ब्याक इण्डिया’ का नारा लागिरहेका छन् । नेपालको जमिन फिर्ता ल्याउन तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा उठाएर भारतमाथि एक्सन लिनुपर्ने बेला सरकारले सामान्य ध्यानाकर्षणको विज्ञप्ति निकालेपछि आक्रोशित छन् नेपाली जनता ।
नाकाबन्दी पछि भारतसँग यसै पनि रुष्ट थिए नेपाली । अहिले वीर पुर्खाहरुले आफ्ना रक्तधारा बगाएर संरक्षण गरेको सीमा भारतले मिच्दा भारतप्रति आक्रामक देखिएका छन् । युवादेखि वृद्धवृद्धा सम्म सीमाको विषयलाई लिएर चिन्तित बनेका छन् ।
रेल र पानी जहाजको सपनालाई अल्पविराम लगाउँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको सीमानाको रक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन् अन्तिम ग्रहण । नेपाली वीरहरुको रगतले सृजित नेपाली भूमि भारतले आफ्नो भन्दै सीमा मिच्नुदा सरकार मुक दर्शक हुँदा सरकारप्रति जनताको धारणा राम्रो नजाने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले रेल र पानी जहाज भन्दा पनि सीमा सुरक्षाको काम अघि बढाउनु पर्छ सरकारले । सीमानामा पर्खाल लगाएर चन्द्र सूर्य ध्वजा फहराउनु पर्छ’, अन्तिमले भने ।
त्यस्तै हाल काठमाडौंमा बस्दै आएका अनुराग शाह पनि सीमा सुरक्षामा सरकारले तत्काल कामकारवाही अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले भारतीय राजदुतमार्फत् यसबारे जानकारी गराएर तत्काल सार्वजनिक भएको भारतीय नक्साबाट हाम्रो कालापानी र लिपुलेकलाई हटाउन कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । र यसबारे भारतको धारणा आउनुपर्छ ।’
यदि नेपाल सरकारले यसमा बेवास्ता गरेमा सरकारविरुद्ध २०६२–६३ को आन्दोलनमा जस्तै गरी जनता उठ्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
थानकोटका ४२ वर्षीय निरज श्रेष्ठको पनि धारणा उस्तै छ । नेपालको सहमतीविना भारतले यति ठुलो कदम चाल्न नसक्ने दाबी गर्दै श्रेष्ठले नेपालका राजनीतिज्ञहरुको मिलेमतोमा सीमा अतिक्रमण भएको दाबी गरे ।
‘कसैको घरभित्र पस्न त केही नाता राख्नुपर्छ भने सीमा जस्तो कुरा यतिकै कहाँ हडप्न सक्छ ? नेपालका राजनीतिज्ञहरुको मिलेमतो भएर न भारतलाई सीमा मिच्न सहज भएको हो । यो जसरी नि फिर्ता आउनै पर्छ’ उनले भने ।
उमेरले ६६ कटेकी मसीनी थापाले गाउँमा भएको जायजेथा बेचेर काठमाडौंमा जग्गा किनेकी थिइन् । अहिले बाटोले जग्गा सबै खाइदियो । आफ्नो जग्गाको चिन्ता एकातिर छ नै, अर्कोतिर थपियो आफ्नो देशको सीमा अतिक्रमणको पीर ।
उनका श्रीमान् काम गर्न सक्दैनन् । उनी पनि अपांग छिन्, एउटा हात छैन । बिहान खाए बेलुकी के खाउँको अवस्थामा उनी छाक भन्दा बढी देशको बारेमा सोच्छिन् । उनलाई आफ्नो देशको सीमा कसैले अतिक्रमण नगरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
उनी भन्छिन्–‘आफ्नो देशको माया कसलाई लाग्दैन र ? नेपाल नलगिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । सरकारले आफ्नो जति सीमा फिर्ता लिन पहल गर्नुपर्छ । पर्खाल लगाउनुपर्छ ।’
उनलाई अहिलेको सरकारसँग भन्दा पनि यसभन्दा अघिका सरकारसँग धेरै गुनासा छन् सीमाका विषयमा । ‘सीमा त मात्रिका, वीपीले बेचेर खाए । अहिलेको सरकारले सीमा बेचेर खान सक्दैन । हुन त अहिलेको सरकारले हामीलाई के नै गरिदिएको छ र ? नाकाबन्दीमा भारतलाई झुकायो यो सरकारले, त्यत्तिमात्र हो’ उनी सुनाउँछिन् ।
सिक्किम ग्यान्टुका ३३ वर्षीय तिम्बु चौहानलाई भने भारतले नेपालको सीमा मिचेको कुरा पत्याउनै मुश्किल पर्यो । उनी नेपाल घुम्न आएका कारण भारतले भर्खरै सार्वजनिक गरेको नक्साबारे अनविज्ञ रहेछन् । उनी अहिले जहाँ (सिक्किम) बस्छन्, त्यो पहिले नेपालको भु–भाग थियो भन्दा उनी छक्क परे ।
‘सिक्किम त भारतको हो । हामीलाई थाहै छैन सिक्किम नेपालमा थियो भनेर । हामीले तिब्बतको भन्ने सोचेका थियौँ । भारत सरकारले सुरक्षालाई लिएर त्यस्तो गरेको हुन सक्छ । सीमा अतिक्रमण हल्ला मात्रै होला । भारतले यस्तो गर्न सक्दैन’, उनले भने ।
उनी भन्छन्– ‘नेपाल भारत मित्र राष्ट्र हो । सीमा मिचिएकै हो भने नेपाल र भारत सरकारले मिलेर यो समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ । कति भारतीय नेपालमा छन्, कति नेपाली भारतमा छन् । हामी मिलेर बस्नुपर्छ । सीमा मिच्ने काम गर्नुहुँदैन ।’
सिराहा कर्जन्हा नगरपालिका वडा नम्बर ७ का ४८ वर्षीय नथुनि यादव भने भारतप्रति रुष्ट सुनिन्छन् । भारतलाई जति ठुलो भएपनि सन्तोष नमिलेको उनी बताउँछन् । राणाहरुको शासनका बेलामा नै अंग्रेजसँग वार्ता गर्दा मिलेमतोमा सीमा बेच्ने काम भएको सुनेको उनले बताए । ‘हाम्रो देश भारतको ठुलो मार्केट हो । भारतले यस्तो गर्न मिल्दैन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो मुद्दा उठाउनु पर्यो । डराएर छोड्नु भएन’, यादवले भने ।
‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियानमा रबी लामिछानेदेखि गगन थापा र बाबुराम भट्टराईसम्म
माइतीघरकाे नारा ‘प्रम ज्यू नुन जनताको काम माफियाको ?’